Boutique Hotels Costa Rica - Costa Rica Ndị Okenye Naanị Ntụrụndụ | El Castillo
Lelee anyị Nke Chivas & Chekwa Ugbu a, Gaa njem ma emechaa onyinye pụrụ iche!
Njegharị nkwari akụ 360º
Agbamakwụkwọ nke Costa Rica
Costa Rica Nlaghachi azụ
Snorkel na Cano Island
Zipline na Osa Mountain
Sọfụ Ụwa-Klas Ebili mmiri
Ịnya ịnyịnya na-aga Nauyaca Falls
Whale na Dolphin Watch
Kayak Site na Mangroves
Gagharịa n'oké ọhịa site ATV
Whitewater Raft nke Savegre River
Gaa na Corcovado National Park
nnukwu ụlọ eze
ebe ỊHỤNANYA bụ n'ezie na ikuku!
Hotel Costa Rica Boutique Luxury
El Castillo mepere emepe
Nnọọ na El Castillo
Ndị ọbịa na-akọwa ahụmịhe kpakpando ise ha na El Castillo dị ka anwansi. Na-aṅụrị ọṅụ n'ụlọ anyị dị oké ọnụ ahịa. Ụlọ ezumike n'akụkụ ọdọ mmiri anyị mara mma nke na-ele nnukwu osimiri Pasifik anya. Tinye aka na nri anyị dị ịrịba ama na mmanya. Mana echefula iyipụ akpụkpọ ụkwụ gị ma nọrọ n'ụlọ. Anyị na-akpọ ya ịdị mma nkịtị.
Enwere ihe kpatara eji kpọọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ anyị nwere ọnụ ụlọ ndị okenye nwere naanị ọnụ ụlọ The Castle: Ọdịdị mara mma nke dị 600 ụkwụ n'elu Oke Osimiri Pasifik nwere ike ịrụ ụka na ọ bụ echiche kachasị egwu na Costa Rica niile. Dị egwu, ee. Ihe, mba. Ndị ọrụ anyị pụrụ iche ga-ahụ na ezumike gị bụ ihe kacha mma n'oge ndụ gị.
Chọpụta El Castillo
Rie nri n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke El Castillo, Castillo's Kitchen, echiche Tebụl Chef na-amụta mgbanwe nke nri Costa Rican. Nweta ihe ndị Costa Rica na efere ọ bụla n'ụzọ ọhụrụ na nke ọhụrụ.
Tinye uche gị
Nabata n'ime oke ohia na ihe dị ka pasentị atọ nke ihe ndị dị ndụ n'akụkụ a nke ụwa. Ọ bụrụ na-amasị gị anụ ọhịa karịa ndụ abalị, nke a bụ ebe maka gị. Ikiri Whale, snorkeling, njem nlegharị anya, ịkụ azụ mmiri miri emi, ịnya ụgbọ mmiri, ịkwọ ụgbọ mmiri, kayak, ịgbakọ osimiri, na ikiri nduru bụ ihe niile n'ime nkeji El Castillo.
Ahụmahụ ihe omume
Nlebanya ndị ọbịa
Ihe ndị mmadụ na-ekwu gbasara El Castillo
Anyị hụrụ El Castillo n'anya! Ndị ọrụ ahụ bụ ihe ịtụnanya! Onye isi njikwa, Rebeca, lekọtara ọnụnọ anyị wee hụ na egbo mkpa anyị niile…. nkasi obi ụlọ, nri, ahịrị zip anyị na njem nlegharị anya n'oké ọhịa ATV, njem njem….
Kpamkpam ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke mbụ. Fọrọ nke nta ka ọtụtụ ndị ọrụ dị ka ọbịa na ndị niile kemgwucha enyi na enyi ma mara ka ị na-eme ka ọnụnọ gị na-atọ ụtọ.
Ebe agbamakwụkwọ zuru oke! Anyị mere agbamakwụkwọ anyị na nso nso a na El Castillo, ọ bụkwa ihe niile anyị rọrọ nrọ, yana ndị ọzọ!
Iberibe nke izu oke na paradaịs okpomọkụ. Ejighị m n'aka ma m ga-amalite nyocha banyere echiche ma ọ bụ ndị ọrụ ebe ha abụọ pụtara ìhè.
Nweta nlele pụrụ iche nke El Castillo tupu ị gaa
Ị nwere ike ịgagharị na họtel ahụ dum, gụnyere ọnụ ụlọ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ubi, ka ị mara ihe ọ dị ka ịnọ na El Castillo. Pịa bọtịnụ dị n'okpuru ka ịmalite!
Soro anyị #ELCASTILLOCR
Pụrụ iche 4.8/5.0
100% nke ndị ọbịa kwadoro
Njem nlegharị anya ogo 360
Kpọtụrụ EL CASTILLO
© 2015-2020 El Castillo Hotel | Ikike niile echekwabara
Saịtị haziri ma wuo ya Laabs Creative
© 2015-2021 El Castillo Hotel | Ikike niile echekwabara
Ogige ntụrụndụ Corcovado